के यसो गर्दा साँच्चै नै बढ्छ त आयु
स्वस्थ्य रहन कसलाई पो मन नहोला र ! सम्भोगको चरम सन्तुष्टिले पनि मानिसलाई स्वस्थ रहन अहं भूमिका खेलेको हुन्छ । स्वस्थ सम्भोगका क्रममा शरीरले अनेक प्रकारका हर्मोन रिलिज गर्छ, जसले मानिसलाई शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ बनाउँछ ।
मनोविज्ञहरुका अनुसार सम्भोगले शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको मात्रालाई बढाउँछ । जसले हाड, स्नायु तन्तुलाई फाइदा पुर्‍याउनुका साथै शरीरमा कोलेस्ट्रोलको आपूर्ति गर्छ । यौन शोधकर्ता डा बिभेर्लीका अनुसार सम्भोग गर्दा इन्र्डार्फिन्स तत्व सक्रिय हुन्छ, जसले प्राकृतिक रूपमा शरीरका दुखाइलाई निर्मूल पार्ने कामसमेत गर्छ । इन्डोर्फिन्स सक्रिय हुँदा टाउको दुख्ने, बाथ आदि रोगलाई निको बनाउँछ । नियमित सम्भोगले तनावसमेत कम गर्न भूमिका खेल्छ ।
यसो त पुरुषको सम्भोग शैली माइक्रोवेभजस्तो हुन्छ । माइक्रोवेभ तुरुन्तै तात्ने हुन्छ । तर, महिलाको सम्भोग शैलीचाहिँ इलेक्ट्रिक ओभनजस्तो हुन्छ । इलेक्ट्रिक ओभनचाहिँ बिस्तारै तात्छ । पुरुषमा भएको टेस्टोस्टेरोन हर्मोनले जोस पैदा गर्छ । जब पुरुषको उमेर ढल्कन्छ, टेस्टोस्टेरोनको मात्रा पनि कम हुन्छ र उसमा जोस पनि कम हुँदै जान्छ । पुरुषको तुलनामा महिला बढी उमेरसम्म सम्भोगमा सक्रिय हुन सक्छन् ।
सम्भोगलाई त्यति हल्का ढंगले पनि लिनु हुँदैन । सम्भोगअघि महिला–पुरुषले एक–अर्काको मनोविज्ञानलाई बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । पुरुष जब तनावमा हुन्छ त्यतिवेला सम्भोगमा उत्रन चाहन्छ । ऊ सम्भोग गरी तनाव विसर्जनको प्रयास गर्छ । महिलामा भने यसको ठीक विपरीत मानसिकता हुन्छ । उनीहरू तनाव, चिन्तामा कहिल्यै पनि सम्भोगमा सहभागी हुन चाहँदैनन् ।
भुइँमा सुत्दाका छन् यस्ता फाइदा
गर्भमा ९ महिना पूरा नगर्दै जन्मिँदैछन् बच्चा, नयाँ त...
विशेष रिपोर्ट : नेकपा नफुटी ओलीलाई हटाउन र नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न नमिल्ने अवस्था हो ?
विप्लवले प्रकाण्डलाई दिए सरकारसँग वार्ताको जिम्मेवारी